Ikhaya > Iindaba > Iindaba zeshishini > Intshayelelo PC iimveliso zeplastiki
I-PC ye-Polycarbonate yipolyester ye-carbon ehambelana nayo apho amaqela e-carbonated ahlelwe ngokunye namanye amaqela anokuba yiphunga, i-aliphatic, okanye zombini.
Iimveliso ze-PC zokubumba zinokumelana nobushushu, ukusetyenziswa kwexesha elide kunokufikelela kwi-130â „ƒ, kwaye kunokumelana nokubanda okuhle, ukufudumeza kweqondo lobushushu -100â„ ƒ. I-PC ayinandawo yokunyibilika, kwi-220-230â „ƒ yayibhakiwe ilizwe, ngenxa yokuqina kwetyathanga elikhulu leemolekyuli, i-viscosity ye-melt iphezulu kunezinye i-thermoplastics.
Iimpawu zoomatshini ze
Iimveliso ze-PC zokubumba zineempawu ezintle zomzimba kunye nezixhobo, ngakumbi amandla afanelekileyo, uzinzo oluqinisekileyo, usenokugcina amandla oomatshini aphezulu kubushushu obuphantsi; Nangona kunjalo, amandla okudinwa kokudinwa asezantsi, ukuqhekeka koxinzelelo kulula ukwenzeka, kunye nokunxiba Ukumelana ne-PC akukho mbala kwaye kuyabonakala, kwaye kunokukhanya kokukhanya okuhle okubonakalayo.
Iimveliso ze-PC zokubumba zizinzile kwimithombo yeasidi neoyile, kodwa hayi ukumelana nealkali, inyibilika kwisizukulwana se-chlorine.PC inokumelana ne-hydrolysis elungileyo, kodwa ukuntywiliselwa ixesha elide emanzini abilayo kulula ukwenza i-hydrolysis kunye nokuqhekeka, akunakusetyenziswa kuphindaphindo oluphezulu Iimveliso zomphunga zoxinzelelo.PC iyachaphazeleka kwezinye izinyibilikisi, nangona inokumelana neeasidi ezibuthathaka, iihydrocarbons ze-aliphatic, isisombululo esinamandla, kodwa inokunyibilikiswa kwizinyibilikisi ezine-chlorine.
Kulula ukukhupha into enetyhefu i-bisphenol A, eyingozi emzimbeni womntu. Musa ukuyisebenzisa ekutshiseni okanye elangeni.
Edlulileyo:Intshayelelo kwimveliso yeplastiki yekhaya
Okulandelayo:Izinto ezifunekayo ekwenziweni komngundo weplastiki osetyenziselwa umzi